INDAWO YOMTHETHO NGOTYALO-MALI eThailand | IXESHA LE-100% LEMPUMELELO | ENGABEKI NXAXOLO | IGISA LOKUNDWENDWELA laseThailand, ukuFudukela kwezoQoqosho ngokutyala imali yokuhlala eThailand ngokutyala iThailand, ukuhlala ngokutyala eThailand, ukuhlala ngokuqhubeka kotyalo mali
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali lwaseThailand kunye neVisa yeGolide
Sinikezela ngeeNkonzo zoFuduko lwezoQoqosho eThailand nge:
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eThailand
● Ubummi ngotyalo-mali oluvela eThailand
● IVisa yegolide eThailand
● Ipasipoti yesibini evela eThailand
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eThailand ngokutyala imali nomhlaba
Best Abameli bokuhlala ngokuTyala eThailand Kunye namagqwetha ee Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali eThailand kunye nabarhwebi beepropathi zokuba ngumhlali eThailand basebenza ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali eThailand zibonelela ngeenkonzo zokuhlala ngokutyala eThailand, ukuhlala kwakhona ngokweenkqubo zotyalo-mali eThailand, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eThailand, ukuhlala okwesibini ngotyalo-mali eThailand, ubumi kwakhona ngobutyalo-mali eThailand, ubumi kunye nokuhlala ngokutyala eThailand. , Indawo yokuhlala isigxina ngotyalo-mali eThailand, Ukuhlala kwakhona okwethutyana ngotyalo-mali eThailand, Ukuhlala kwakhona ngezikimu zotyalo-mali eThailand, Ubumi ngokutyala eThailand, Ubummi ngeenkqubo zotyalo-mali eThailand, Ubumi ngenkqubo yotyalo-mali eThailand, okwesibini Ubummi ngotyalo-mali eThailand, ubumi bobabini ngotyalo-mali eThailand, indawo yokuhlala kunye nobumi ngokutyala eThailand, ukuhlala kunye nokuba ngummi ngokutyala eThailand, iinkqubo zoBumi bezoqoqosho eThailand, Ubummi ngesikimu sotyalo-mali eThailand, Ubummi ngezikimu zotyalo-mali eThailand, okwesibini ipaspoti kwi Thailand, iinkqubo zokundwendwela yesibini eThailand, inkqubo yesibini yokundwendwela eThailand, ipasipoti yesibini eThailand, indawo yokuhlala kunye nepasipoti yesibini eThailand, ipaspoti yesibini yezopolitiko eThailand, ipasipoti yesibini yotyalo-mali eThailand, ipasipoti yesibini yokuba ngummi eThailand, iskim sepasipoti yesibini I-Thailand, izikimu zepasipoti zesibini eThailand, i-visa yegolide eThailand, ii-visa zegolide eThailand, iinkqubo ze-visa zegolide eThailand, inkqubo yegosa yegolide eThailand, eyesibini visa yegolide eThailand, inkqubo yesibini yegosa yokungena eThailand, i-visa yegolide kabini eThailand, ubumi kunye ne-visa yegolide eThailand, indawo yokuhlala kunye nevisa yegolide eThailand, ubumi baseVisa obugolide eThailand, inkqubo yevisa yegolide eThailand, izikimu zevisa zegolide eThailand.
"1 izisombululo zokumisa" kuko konke ukuhlala kwakho ngokutyala eThailand ngenkxaso eyongezelelweyo.
Utyalo-mali oluncinci eThailand lokuhlala kwakhona ngotyalomali: USD 15,000
Intshayelelo eThailand kunye nokuHlala kwakhona ngoTyalo mali
Funda nzulu ngeThailand
Uhlanga lujikeleze ngasentshona nasemantla ntshona yiMyanmar (iBurma), emazantsi-ntshona ngoLwandle iAndaman, empuma nasempuma mpuma yiLao PDR, emzantsi mpuma yiCambodia, emazantsi yiGulf of Thailand (ijelo laseMzantsi China Sea), nangaseMalaysia.
I-Thailand igubungela ummandla we-513,120 km², ilizwe likhulu nje kancinci kuneSpain okanye ngaphezulu kokuphindwe kabini ubukhulu bommandla wase-US wase-Wyoming.
I-Thailand iqhubeka ukuba yenye yezona nkcaso ziqhelekileyo kubakhenkethi nakubantu abadla umhlala-phantsi kwi-mpuma ye-Asia. Nokuba uhlala kwikomkhulu elishushu lase-Bangkok, isixeko esikumantla e-Lanna, i-Chiang Mai, okanye kufutshane nolwandle olunqabileyo olubeke ilizwe emephini, iThailand inezinto ezininzi ekufuneka zizisiwe etafileni. wonke umntu.
Nangona abanye benokubona ubushushu bonyaka nobushushu njengobushushu ngokugqithileyo kwaye bumanzi ngenxa yokhetho lwabo, abanye babulisa ngentliziyo iphela emva kokuba bemkile kumhla wokubandayo kweminye imimandla esemantla. Ngomgudu omncinci wokuphila, iinkonzo zonyango eziphezulu kwixabiso elifanelekileyo, kunye ne-assortment ebanzi yomhlaba ofikelelekayo ukukhangela, akukho nto kunzima ukuyengwa nguMhlaba woSmiles.
Iinqwelomoya ezahlukeneyo zinika uhambo lwemihla ngemihla kwiindawo ezininzi ezisezidolophini eUnited States naseCanada, kanye njengakwezinye inkcaso ngokubanzi. Ngendawo ekugxilwe kuyo kuMazantsi mpuma eAsia, iThailand sisiseko esifanelekileyo sokuphanda amanye amazwe asondeleyo. Akukho bungqina bokwenene be-ex-pats kuyo nayiphi na into yesi sizwe. Zisasazeke ngokwenyani ukusuka esiphelweni esinye seThailand ukuya kwesinye.
Abanye baya emantla esixeko saseChiang Mai apho kuhlwa khona kupholile kuninzi lonyaka. Ngelixa intsalela yesizwe isaphumlile kwimfudumalo kwiinyanga zemozulu ezibandayo, amaqondo obushushu kwesi siqwenga sesizwe anokuhla aye kuma-60 F okanye ngaphantsi kobusuku. Nantsi i-pats-ex ixabisa uluhlu olubanzi lweevenkile, imiboniso yobugcisa, imisebenzi yobugcisa eqhelekileyo, kunye neemarike zomoya ezivulekileyo ezahlukeneyo. Akukho nto kunzima ukuyilayisha kwi-espresso yabucala, ukuvelisa, nangaphezulu kwigumbi lokucoca.
I-Bangkok itsalela kubantu abathembele kwisiphithiphithi kunye namandla edolophu enkulu. Isixeko siyaphawuleka ngenxa yendlela yaso eguqukayo yobomi, amanqanaba entlalontle, amandla asebusuku, kunye nomboniso omangalisayo wezigqibo zokutya. Nangona kubiza kakhulu kuneendawo ezahlukeneyo, kusenokwenzeka ukufumana umhlaba ukuze uhambelane nezicwangciso zezemali.
Iindawo ezaziwayo ezingaselunxwemeni ezingaselunxwemeni, umzekelo, iPhuket kunye nePattaya ziyaqhubeka nokutsala abantu abaninzi ababedla ngokuthatha umhlala-phantsi kunxweme lolwandle. Nangona inani elikhulu lale mimandla ngoku lithengisiwe kakhulu, kusenokwenzeka ukucinga ngeThailand eqhelekileyo kwiminyaka edlulileyo ngokuhambisa iikhilomitha ezimbalwa ukusuka kwezona ndawo zidumileyo zomdla. Idolophu ekuthiwa yeyase-Thai ngaselwandle yeHua Hin kukuhamba nje kweeyure ezimbalwa emazantsi eBangkok kwaye isabeke ngokwenyani ngokuthelekiswa namaqabane ayo athandwayo. Ewe, nokuba kukufuphi nonxweme, umsebenzi omncinci wesikolo kwangaphambilinokuzisa umzamo omncinci wokuphila. Iindleko zokuphila ziyahluka ngokuxhomekeke kwimida. Okwangoku umntla weThailand ngowona ungabizi kakhulu.
I-Bangkok ibiza kakhulu. Abathengisi apha bakhetha ukonwabela ukuthenga kunye nokuzonwabisa. Idolophu enkulu yaseThailand inika amaziko amakhulu okuthenga, iindawo zokutyela ezikhethiweyo, imiboniso kunye neqonga. Zininzi iindawo onokungena kuzo ngemali yakho. Ndicinga ukuba kufuneka uchithe nakweyiphi na imeko i-40,000- 60,000 Bhat ukuze ube nendlela efanelekileyo yokuphila. Kwimeko apho uqoqosho, ngelo xesha ngokucacileyo, kunokwenzeka ukuchitha imali encinci. Zama ukungaphumi ukuphela kweveki nganye, yitya nje kwimivalo yommelwane, kwaye ungachithi kwizinto ezingenamsebenzi kwaye uya kuba nethuba lokuphila nge-30,000 baht inyanga nenyanga.
Iinkcukacha ezisisiseko sokuhlala ngokuTyala eThailand
Ubuncinci botyalomali Indawo yokuhlala ngokutyala eThailand
Indawo yokuhlala ngokutyala imali eThailand
Ukuhlala kwakhona ngotyalo-mali
Iqhubekeka nexesha lokuhlala ngokutyala eThailand
Emva kokuhlala eThailand ubuncinci iminyaka eli-10.
Ubumi obuBini buvunyelwe kubemi baseThailand
Iinketho zotyalo mali ze Indawo yokuhlala ngokutyala eThailand
Inkqubo ye-ELITE yaseThailand yinkqubo evunyiweyo ngurhulumente apho i-visa ikhutshwa yi-Thailand Privilege Card Company Limited (TPC) eqhutywa kwaye yabekwa iliso ngu-Mphathiswa Wezokhenketho neMidlalo yaseThailand.
Kwi-visa yokuhlala kwayo, iThailand ibonelela ngezinto ezintathu onokukhetha kuzo. Inkqubo yabemi be-HNW bamazwe aphesheya abafuna ukufikelela rhoqo okanye ukuhlala eThailand.
Inkqubo yokuhlala ephezulu eThailand ibonelela abafaki-zicelo ngelungelo lokuhlala eThailand ukuya kuthi ga kwiminyaka engama-20, ukufikelela kumaziko anelungelo kunye nezibonelelo ze-VIP. Ukufumana i-visa yokuhlala yase-Thailand elite, abasemzini shuld bajoyine i-Thailand elite, inkqubo ekhethekileyo ebonelelwe yinkampani yamalungelo amakhadi eThailand. (TPC)
Le nkqubo yaphehlelelwa ngo-2003 ukurhwebesha abemi abazizityebi bamazwe aphesheya abafuna ukuchitha ixesha elide elizweni kwaye baxhamle kumgangatho ophakamileyo wokuphila kunye nolawulo lwerhafu.
Inkqubo yokuhlala yase-Thailand inikezela ngeendlela ezisixhenxe, kwezi zintathu zilandelayo ezaziwa kakhulu:
Elite Ultimate Lungelo lilungelo lokuhlala iminyaka engama-20 ngomrhumo omalunga ne- $ 60,000 kunye nomrhumo wonyaka malunga ne- $ 600. Esi sicwangciso sibandakanya i-VIP ekhethekileyo yokuboniswa kwesikhululo seenqwelomoya kunye neenkonzo zokufikelela kwigumbi lokuphumla, ukugqithiselwa okungenamkhawulo kwisikhululo seenqwelomoya, isithuthi sikarhulumente kunye neenkonzo zokubukelwa kwegalufa, unyango lwe-spa kunye nokuhlolwa kwezempilo minyaka le.
UKUFIKELELA KWABASEBENZI BABASEBENZI
Elite Ilungelo lokufikelela lilungu 10 unyaka I-visa yokuhlala yenzelwe izicelo zosapho. Intlawulo yokufumana umenzi-sicelo ophambili ijikeleze i-30,000 yeedola kwaye kuxhomekeke kumntu ngamnye, i-USD 22,500. Akukho mrhumo wonyaka. IiVIP zokubonelela ngezixhobo zesikhululo seenqwelomoya, iinkonzo zohambo, iinkonzo zononophelo zikarhulumente kunye nokuhlolwa rhoqo kwezempilo kuyabandakanywa kwiphakheji.
UKUFIKELELA NGOKULULA KWABANTU
Ukufikeleleka ngokulula kwe-Elite yiminyaka emihlanu yokuhlala i-visa evumela ukuphuma okanye abantu beshishini ukuba bangene eThailand ngexesha rhoqo kwaye ngokulula. Olu khetho lufuna ukuhlawulwa kube kanye malunga ne- $ 15,000 kwaye akukho ntlawulo yonyaka iyafuneka. Malunga ne- $ 45,000, i-visa ye-Elite Easy Access yokuhlala inokuphuculwa kwi-Elite Ultimate Privilege ukhetho.
I-TPC ibonelela ngenkqubo yesicelo sobumi obulula: i-visa iya kukhutshwa kungaphelanga nenyanga enye kwaye inokuqokelelwa kwisikhululo seenqwelomoya samazwe aphesheya eThailand. Ngaphandle kokuba babelwe, abafaki-zicelo banokuhlala eThailand okokoko bafuna, ngokungqinelana nemigaqo yephakheji ekhethiweyo. Abafaki-sicelo kufuneka, kodwa bazise i-TPC ukuba bahlala kweli lizwe ixesha elingaphezulu kweentsuku ezingama-90.
UBUMI NGOTYALO-MALI ETHAILAND
I-visa yokuhlala efumaneka kwinkqubo yokuhlala ye-elite eThailand ayikhokeleli kwindawo yokuhlala esisigxina okanye ubume bobumi. Indawo yokuhlala esisigxina inokufunyanwa kuphela ukuba umfaki-sicelo une-visa yaseThai engafuduki kangangeminyaka emithathu ubuncinane ngaphambi kokungeniswa kwesicelo sakhe. Emva kokubamba ubume bokuhlala ngokusisigxina eThailand kangangeminyaka eli-10 ephindaphindwayo, kunokwenzeka ukuba ufake isicelo sobumi.
Inkxaso yabathengi kubuhlali ngokutyala imali eThailand
Iqela lethu Kuhlala ngabameli botyalo mali baseThailand kwaye Kuhlala ngoTyalo-mali Amagqwetha eThailand ibonelela abathengi kunye neentsapho zabo eThailand ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali oluvela eThailand, indawo yokuhlala ngokutyala imali evela eThailand namanye amathuba otyalo-mali wokufudukela kwelinye ilizwe, kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu aziphelelanga nje ekuhlaleni ngenxa yotyalo-mali oluvela eThailand okanye ngeVisa yaseGolide esuka eThailand okanye ubummi ngotyalo-mali oluvela eThailand okanye ipasipoti yesibini, sikwanceda nakwezona mali zilungileyo zokufumana izindlu eThailand, ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo ukuba ufuna ukuseka inkampani I-Thailand okanye i-offshore, izibonelelo zabantu eThailand kunye nokunye okuninzi, okubandakanya ukucwangciswa kwemali kunye nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi ngaphakathi naseThailand nakwindawo yokuhlala yesibini.
Inkxaso ekhethekileyo kubemi baseThailand:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali yeThailand, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena eThailand, abarhwebi abafudukela kwamanye amazwe abafikelelekayo eThailand, Indawo yokuhlala efikelelekayo ngabacebisi botyalo-mali baseThailand, Indawo yokuhlala efikelelekayo ngamagqwetha otyalo-mali eThailand kunye nefemi yokubonelela ngokufuduka eThailand.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukusuka eThailand ukuya kumazwe angama-37.
IVisa yegolide eThailand ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi ngokutyala imali ukusuka eThailand ukuya kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini ukusuka eThailand ukuya kumazwe angama-37.
Ukufuduka okusekwe kwishishini ukusuka eThailand ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali ezivela eThailand.
Iinkqubo zeVisa zegolide eThailand ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi ngeenkqubo zotyalo-mali ukusuka eThailand ukuya kumazwe angama-37.
Iipasipoti yesibini ukusuka eThailand ukuya kumazwe angama-37.
Iinkqubo zokufuduka kweshishini ukusuka eThailand ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali lwaseThailand ngeeNdawo zokuThengisa izindlu
Sibonelela ngenkxaso kutyalo mali lwearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba eThailand ngombono wokuba umthengi kufuneka afumane imbuyekezo entle kutyalo-mali lwaseThailand, nanini na, xa efuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo ngokuhlala kwabo ngokutyala eThailand. Siqhagamshelene nabaphuhlisi abambalwa bezindlu eThailand abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezintle eThailand, belanda eyona mbuyekezo.
Eyona nkqubo yokuhlala kwezindlu eThailand notyalo-mali kwiarhente yezindlu eThailand.
Kufuneka uyazi - Indawo yokuhlala yaseThailand ngoTyalo mali
Ukuhlala kwakhona liGqwetha loTyalo-mali laseThailand kuya kubonelela ngoncedo lwamaxwebhu olunesiqinisekiso sokuhlala kwakho ngempumelelo ngokutyala imali eThailand. Iinkonzo zethu eziqhelekileyo zokuHlala ngokuTyala eThailand kubandakanya:
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufuduka eThailand okanye eThailand, ngokusekwe kwiziphakamiso eziza kwenziwa
Siqhuba inkuthalo yokuqala ngenxa yoku, ukulungiselela ingxelo ngaphambi kokucebisa ukuhlala kwakhona ngotyalo-mali lwaseThailand kubaxumi ngokufumana imvume yokuhlala eThailand kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo efanelekileyo eThailand, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubele phambili kunye nokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sotyalo-mali eThailand kuya kufuneka sifumane iikopi zokuvavanywa komthengi kunye namalungu epasipoti.
Inguqulelo kunye ne-apostille yamaxwebhu Ukuhlala kwakhona ngesicelo sotyalo-mali eThailand. Amagqwetha ethu akhethekileyo okuhlala ngokutyala imali eThailand kunye nevisa yegolide izokunceda ekugcwaliseni iifom namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu akho kunye nawosapho lwakho ahlalise isicelo sokutyala eThailand sele elungile, siya kuwuzalisa ngabasemagunyeni abafanelekileyo baseThailand.
Ubude bexesha: iintsuku 30
Nje ukuba isicelo sakho sokuhlala ngokutyala eThailand samkelwe, sabelana ngeendaba ezimnandi nawe kwaye siqala ukulungiselela ezinye izixhasi.
Asikuxhasi okanye ukubonelela ngoBumi ngeenkonzo zotyalo-mali eThailand kubantu abakhankanywe ngezantsi okanye amashishini eThailand:
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali eThailand azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi beengalo neembumbulu ukusuka okanye ukuya eThailand.
Kuhlala ngokweenkqubo zotyalo-mali eThailand azinikezelwanga ukugadwa ngobuchwephesha eThailand okanye kwi-espionage yemizi-mveliso yeenkqubo zotyalo-mali ngaphakathi okanye ukusuka okanye ukuya eThailand.
Kuhlala ngokubonisana notyalo mali eThailand azinikezelwa ngayo nayiphi na imisebenzi engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho eThailand.
Kuhlala ngenkxaso yotyalo mali eThailand ayenzelwanga abantu abajongana nezinto zemfuza eThailand.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali eThailand ayisiyo yamashishini ajongene nezixhobo ezinobungozi okanye eziyingozi zebhayoloji okanye zenyukliya eThailand.
Kuhlala ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso yeThailand ayifumaneki kubantu baseThailand abasebenza kurhwebo, ukugcinwa eThailand, okanye ukuhanjiswa kwamalungu oLuntu.
Kuhlala ngotyalo-mali eThailand ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Kuhlala iinkonzo zenkqubo eThailand ayizizo ezenkolo kunye nokunikela kwabo eThailand.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali kwi Thayilendi ayibonelelwa ngabantu abajongana nephonografi eThailand.
Indawo yethu yokuhlala Amagqwetha eThailand abaxhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi eThailand.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo afanelekileyo okuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubathengi baseThailand kunye ne-KYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva malunga nokwaliwa kwabasemagunyeni eThailand malunga nokuvunywa kwesicelo Kuhlala ngotyalo-mali eThailand.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala eThailand nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sibonelela ngeyona ndawo ingcono yokuhlala kwabaThailand kutyalo-mali, ukufudukela kwelinye ilizwe kunye nokucwangciswa kwezindlu eThailand.
Ixhaswe kukuhlala kwamazwe ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho waseThailand, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Indawo esihlala kuyo ngeenkonzo zotyalo-mali eThailand zisinika amaxabiso aphantsi, ngezinga lempumelelo laseThailand.
Sithathe iminyaka yamava ngokuHlala kwakhona eThailand sixhasa abathengi kunye neentsapho zabo eThailand.
Amava okuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo-mali eThailand kunye neearhente zomthetho zaseThailand ezixhasa abathengi.
Sinezona solicitors zibalaseleyo kunye neearhente zenkqubo yokuphatha iThailand kunye nesicelo esizinikele kwimpumelelo yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho eThailand nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu eThailand
Sinamava aphesheya kubuhlali ngokutyala kubandakanya iThailand, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko, ukuhlala kwakho ngokutyala imali eThailand kuyasilela, kukho amanye amazwe angama-36 esiwasebenzelayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zokuHlala kwakhona ngokuTyala eThailand
Ukubala iindleko zokuhlala kwakhona ngokutyala imali eThailand nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi baseThailand, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zokuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali yaseThailand kunye nezinye iindleko.
Iintlobo ze ivisa eThailand
Inkqubo yemvume yokusebenza eThailand
Ukuhlala okwethutyana eThailand
Indawo yokuhlala yaseThailand
Indawo yokuhlala ngoTyalo mali eThailand kunye nezinye iiNkonzo
Sibonise ezinye iinkonzo ezimbalwa esizibonelelayo eThailand ukulungiselela iimfuno ezikhawulezileyo okanye ezizayo.
Ukuba uceba ukufudukela nosapho lwakho eThailand ngokutyala, thina njengeqabane lakho eThailand, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo eThailand ngamaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle kokuhlala ngokubonisana notyalo-mali eThailand, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo ze-HR naseThailand, ongazukuyifumana phantsi kwesambrela esinye esibonelelwe ngabaphi na abanye abacebisi baseThailand abasenza ivenkile yokuma eThailand nakwamanye amazwe angama-106.
"Sityala iminyaka yokulinga kunye nehlabathi jikelele kumazwe angama-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye neshishini eThailand ekufezekiseni iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yabathengi bethu engaphaya kokuHlala ngokuTyala imali eThailand ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nokuzimanya eThailand nakwamanye amazwe.
Inkampani e Thailand
Singakunceda bhalisa inkampani eThailand okanye amazwe ase-Offshore kunye namazwe angama-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani eThailand zitshiphu kuthi.)
Iakhawunti yeBhanki eThailand
Nawuphi na umtyalomali ofudukela eThailand uya kufuna iakhawunti yebhanki yakho eThailand kunye neakhawunti yebhanki yenkampani eThailand, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaselunxwemeni.
Isango lokuhlawula eThailand
Ngaba ufuna ukubonisana eThailand, kuba izisombululo zentlawulo yedijithali eThailand Njengesango lokuhlawula ngokwesiko okanye ngefintech eThailand okanye kwizisombululo ze-crypto, masixelele.
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali Thailand ukuba uceba qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho eThailand ukuqala kwangoko eThailand.
Iinkonzo zabasebenzi eThailand
yethu Inkampani yabasebenzi eThailand inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona izithuba zengqesho eThailand free.
Iinombolo zeFowuni eyiNtloko eThailand
Iinkqubo zeefowuni zeshishini eThailand kunye amanani abonakalayo eThailand Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali eThailand
Accounting, ngenxa yenkuthalo efanelekileyo eThailand kunye okuninzi kakhulu.
Idilesi yeOfisi eyiyo eThailand
Ukuseta ishishini eThailand
Emva kokuhlala ngokutyala eThailand, ukuseta ishishini kwi Thayilendi .
Sinikezela ngezisombululo ze-IT apha ngezantsi eThailand
Uyilo lwewebhu eThailand
Uphuhliso lwezorhwebo eThailand
Uphuhliso lwewebhu eThailand
Uphuhliso lweBlockchain eThailand
Uphuhliso losetyenziso eThailand
Uphuhliso lweSoftware eThailand
Amagqwetha okuhlala kwakhona ngoTyalo mali eThailand
Sibonelela ngokuHlala ngokusemthethweni ngezisombululo zotyalo-mali eThailand kwaye impumelelo kubaxumi bethu ibaluleke kakhulu, kuba iThailand, siziinkokheli, ifemu yethu yezomthetho eThailand ineearhente zokufudukela eThailand, sinedumela lokuhambisa awona mava asemagqabini okulungiselela abathengi eThailand kunye Izisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kubantu baseThailand kunye neentsapho zabo. Ukuhlala kwethu liqela lotyalo-mali eThailand kubonelela ngezisombululo eziyilwe ngempumelelo yabathengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, inkosikazi, abazali) banelungelo lokufumana imvume yokuhlala eThailand, xa imvume yakho yokuhlala eThailand yamkelwe.
Amandla egqwetha laseThailand ayafuneka kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngoKuhlala kwakhona ngabaceli botyalo-mali eThailand. Ukuba useThailand okanye uceba ukutyelela iThailand, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani eThailand ukude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuba asetyenziswe kumda waseThailand. Kuxhomekeka kwilizwe ohlala kulo, kufanele ukuba ukhubeke okanye ubhaliswe ngokusemthethweni ngummeli waseThailand.
Imibuzo Ebuzwa Rhoqo - Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eThailand
Ithini inkcazo yokuhlala ngokutyala eThailand?
Ukuhlala kwakhona ngotyalo-mali eThailand, kunokuchazwa njengokufumana indawo yokuhlala eThailand ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseThailand ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, neshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njlnjl. Faka isicelo sokuhlala ngokutyala eThailand, ukuhlala kwenkqubo yotyalo-mali yaseThailand. Ixhaswe kukuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali eThailand, ngokuhlala kwethu ngokugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eThailand, indawo yokuhlala eyiyo ngamagqwetha otyalo-mali eThailand kunye nokuhlala okungcono ngabacebisi botyalo-mali baseThailand, abasebenza kwindawo yokuhlala efanelekileyo ngabameli botyalo-mali eThailand, kunye neefem eThailand.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali eThailand | Ukuhlala kwakhona ngabameli botyalo mali eThailand | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eThailand | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eThailand | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo mali eThailand
Ithini inkcazo yokuba ngummi ngotyalo-mali eThailand?
Ubummi ngotyalo-mali eThailand, bunokuchazwa njengokufumana ubumi baseThailand ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseThailand ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, ukuthengisa izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl njl. Faka isicelo sokuba ngummi ngotyalo-mali eThailand, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali yaseThailand exhaswa bubummi ngeenkonzo zotyalo-mali zaseThailand, ngobumi bethu obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eThailand, ubumi obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eThailand nangobumi obuphezulu ngabacebisi botyalo-mali baseThailand, abasebenza Ubumi obugqwesileyo ngabameli botyalo-mali eThailand, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eThailand.
Iinkonzo zongenelelo lwabatyali mali eThailand | Amaxabiso afikelelekayo okufudukela eThailand | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha eThailand | Abatyali mali abafikelelekayo eThailand | Abatyali mali abangenakufikeleleka eThailand | Iifemu zomthetho ezingenaxabiso ezifikelelekayo eThailand
Ithini inkcazo yepasipoti yesibini eThailand?
Ipasipoti yesibini eThailand, inokuchazwa njengokufumana ubumi baseThailand ngokutyala imali kuqoqosho lwaseThailand ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, izindlu nomhlaba, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sepasipoti yesibini eya eThailand, inkqubo yesibini yokundwendwela eThailand exhaswa ngu iinkonzo zencwadana yokundwendwela yesibini eThailand, ngamagqwetha esibini eepasipoti eThailand, awona magqwetha esibini eepasipoti eThailand kunye nabacebisi beepaspoti besibini abaseThailand, abasebenza kwiiarhente zokundwendwela eziseThailand, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eThailand.
Iinkonzo zokundwendwela zesibini zaseThailand | Iiarhente zokundwendwela zesibini eThailand | Amagqwetha esibini epasipoti eThailand | Igqwetha lesibini lokundwendwela eThailand | Abacebisi bokundwendwela besibini eThailand
Yintoni inkcazo yevisa yegolide eThailand?
I-visa yegolide eThailand, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala eThailand ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseThailand ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, iibhondi zikarhulumente, ishishini, izindlu nomhlaba, njl. Faka isicelo sevisa yegolide ukuya eThailand, inkqubo yegosa yegolide yeThailand exhaswa ngu Iinkonzo zeVisa zegolide eThailand, ngamagqwetha ethu abalaseleyo egolide eThailand, amagqwetha egosa aphezulu egolide eThailand kunye nabacebisi abagqwesileyo begosa baseThailand, abasebenza kwiiarhente zevisa zegolide eThailand, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eThailand.
Iinkonzo zevisa ezimnandi eThailand | Iiarhente zevisa ezimnandi eThailand | Amagqwetha egosa egolide eThailand | Amagqwetha egosa egolide eThailand | Abacebisi ngevisa abasemagunyeni eThailand
Lithini elona mali lisezantsi lokuhlala ngokutyala eThailand?
Ubuncinci botyalomali kubuhlali ngokutyala eThailand yi-USD 15,000.
Ngaba ubonelela ngenkxaso yezomthetho eThailand yoBuhlali ngokuTyala?
Ewe, igqwetha lethu eThailand kunye neearhente eThailand zibonelela ngenkxaso kubuhlali ngokutyala eThailand.
Ngaba ukuhlala kwakhona ngokuTyala eThailand kubiza?
Iindleko zokuhlala kubuTyalo-mali eThailand kunye nokuHlala kwakhona ngeemfuno zengxowa mali eThailand yeyabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela umrhumo woboniswano ngokuHlala kuTyalo-mali lwaseThailand, sikwabonelela ngenkxaso-mali eninzi yoBuhlali kwakhona ngezisombululo zotyalo-mali.
Leliphi ilizwe elingenza isicelo sokuhlala ngokutyala imali eThailand okanye nge-visa yomtyali mali ukuya eThailand?
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali kunokusetyenziswa ngabemi beliphi na ilizwe kodwa imizekelo embalwa kukuhlala ngokutyala eThailand ukusuka eAsia, ukuhlala kwakhona ngokutyala eThailand ukusuka eAfrika, ukuhlala kwakhona ngokutyala eThailand ukusuka eYurophu, ukuhlala kwakhona ngokutyala eThailand ukusuka eMzantsi Melika, Ukuhlala kwakhona ngotyalo-mali eThailand usuka eMalaysia, Ubume ngokutyala imali eThailand usuka eBangladesh, Uhlala ngokutyala imali eThailand usuka eIndonesia, Uhlala utyalo-mali eThailand usuka eSri Lanka, Uhlala utyalo-mali eThailand usuka eNepal, Uhlala kwakhona ngokutyala imali eThailand usuka eIndiya naseBuhlali ngotyalo-mali ukuya eThailand ukusuka e-UAE.
Indawo yokuhlala yobungcali ngesiKhokelo kuTyalo-mali eThailand
Cela ukubonisana simahla malunga nokuHlala kwakho ngokuTyala eThailand
Amagama abalulekileyo kubuhlali ngokuTyala imali eThailand
ISebe lezeNdalo kunye nezixhobo zeNdalo
IBhodi yokuLungelelanisa amaNombolo eSizwe
ISebe looRhulumente bamaphakathi noRhulumente weNgingqi
I-Philippine Atmospheric, i-Geophysical kunye neNkonzo yeNkanyezi yeNkwenkwezi
ISebe lezeNtlalontle kunye noPhuhliso
Igunya leSizwe loqoqosho kunye nophuhliso
ISebe lezoThutho kunye noNxibelelwano
ISebe Lenguqu kwezolimo
ISebe leMfundo, iNkcubeko kunye neMidlalo
Icandelo loLawulo lweMimandla yasePhilippine
ISebe lohlahlo-lwabiwo mali kunye noLawulo
ISebe lezeNzululwazi neThekhnoloji
ISebe leMisebenzi kaRhulumente kunye neendlela eziphezulu
IOfisi yeSizwe yeZibalo
ISebe lezabaSebenzi kunye neNgqesho
Umkhosi oxhobileyo wePhilippines
Hlanganisa kwi ISebe lokuFudukela eThailand , linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yokukhawulezisa uMfuduko eThailand